निकिताको दुर्भाग्य !
काठमाडौँ । शृंखला खतिवडाले मिस नेपालको ताज पहिरिनेवित्तिकै निकिता चाण्डकले अभिनय करिअर सुरु गरिन् ।
बलिउडमा असफलता पाएपछि कुलतमा फसेका कलाकारहरु !
ऐश्वर्य राई बच्चन अभिनित चलचित्र ‘फन्ने खाँ’को टिजर रिलिज
एजेन्सी । बलिउड चलचित्र ‘फन्ने खाँ’ को टिजर सार्वजनिक भएको छ । टिजरमा अनिल कपूर, ऐश्वर्य राई बच्चन र राजकुमार रावलाई देख्न सकेन्छ ।
अभिनयमा हिट यी अभिनेत्री, जो अध्ययनमा छैनन् १२ पनि पास
मुम्बई । बलिउडमा राम्रा अभिनेत्रीको कमी छैन । बलिउड अभिनेत्री स्वदेशमा मात्र होइन, विदेशमा समेत अभिनय मार्फत जादु चलाउन सफल देखिएका छन् ।